‘Lomkhando ubuxube ukufundisa kanye nokwenza izibalo khona kuzokwenza kubelula kothisha bezibalo ezikoleni babe nokuzethemba nolwazi uma befundisa i-geometry kumabanga kaGrade 10, 11 no12, njengoba kudingeka ku- Curriculum Assessment and Policy Statements,’ kusho uSolwazi Simon Mwembi, oyi- Academic Leader yeZibalo e-UKZN.
USolwazi Poobhalan Pillay uthe i-UKZN ibikhathazekile ngezinga lezibalo elisezinganeni eziphuma ezikoleni nokuthi othisha abaningi abafuni ukufundisa iGeometry ngoba kwabona abayiqondi kahle.
‘Senze isinqumo sokuthatha iGeometry siyiyise kothisha,’ kusho uPillay. ‘Sifuna ukuthuthukisa izinga lokufundisa iGeometry ezikoleni zamabanga aphakeme. Ngalendlela othisha bazofundisa into abayaziyo.’
Kwenye yezinhlelo, isiKole seZibalo, Ukubala kwabantu nezeSayensi yamaKompuyutha sizovula amathuba okuthi othisha bafunde iZibalo 130 ukuze bathuthukise ulwazi lwabo baqhube nezifundo zabo.